नवराजकी प्रेर्मिका भनिएकी बहिनिको पेटमा बच्चा भन्ने साचो कि झुटो ? कसरि बाहिरियो यस्तो कुरा ? – Sanchar Patrika
May 30, 2020 638
काठमाडौं । आफुलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने सविता भट्टराईले रुकुम जाजरकोट घटनालाई जातिय विभेदका कारण भएको घटना भएको बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा चर्चीत भएका घटनाहरुमा आफ्नो धारणा राख्दै आउने सविताले रुकुमको घटनामा पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले यो घटनालाई पनि जातिय विभेदकै हो भन्ने बताएकी छन् । उनले युवती नवराज विकको घरमा पटक पटक गएर बसेको, नवराजको परिवारले वुहारीको रुपमा स्वीकारी सकेको पनि देखिएको बताएकी छन् ।
नवराजको आमाले युवतीको पेटमा बच्चा छ भनेर दावी गरेको विषयमा पनि उनले छानविन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले बारम्बार केटी नवराजको घरमा गएर बस्ने भएकाले नवराजको आमाले भनेको कुरामा सत्यता हुनसक्ने बताएकी छन् । नवराजकै आमाले त्यो कुरा भनेका कारण यो कुरालाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले यो घटनामा केटी पक्षका ब्यक्तिले ह त्या गरेर फालेको दावी गरेकी छन् । शनिवार भएको घटनामा नवराज सहित ५ जनाको निधन भइसकेको छ भने एक जना अझै फेला परेका छैनन् ।
उनले युवतीको आमाले जातिय शब्द प्रयोग गरेका कारण यो जातियताका कारण नै भएको घटना हो भनेर दावी गर्न सकिने बताएकी छन् । उनले अझ वडाध्यक्षको पनि संलग्नता देखिएका कारण यो घटनामा निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले अहिलेको जमानामा पनि जातियताका नाममा भएको यो घटनाले देशकै देश निहुरिएको बताइन् । प्रेममा बलिदान दिएर निधन भएका कारण उनीहरुलाई परिवारका सदस्यले माग गरे जस्तो शहिद घोषणा गर्न नमिल्ने बताइन् । उनले प्रेम कहानीका रुपमा यो विषय चर्चीत हुनसक्ने भएपनि सहिद भन्न नमिल्ने बताएकी छन् ।
Prevललितपुरकी २३ वर्षीया कोरोना संक्रमित ६ दिनकी सुत्केरी
Nextपशुपतिनाथले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, जेठ १८ देखि २४ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल !
कसरी जन्मिए सन्नी लियोनका तीन सन्तान, कसरी सारै दयालु र संस्कारी बनिन् ?
देशैभरिका घरबेटीका लागि गृह मन्त्रालयले जारि गर्यो सूचना, यदि यस्तो गरेको पाइए हदैसम्मको सजाय हुने ! (2730)